Ukuqedela okungaphezulu - iPandawill Technology Co., Ltd
Ukuze kuzuzwe ukusebenza okuhle kakhulu komhlangano, sidinga ukufanisa isiphetho esidayisa kahle kunazo zonke kuhlelo lwakho lokusebenza nenqubo yomhlangano.
Ukuze wanelise yonke inhlanganisela yephrofayili yomhlangano, ukusetshenziswa kwempahla kanye nemfuneko yohlelo lokusebenza, sinikeza uhla olulandelayo oluphelele lokuqedwa kokuthengiswa njengenqubo yangaphakathi endlini:
✓I-HASL evunyelwe ngokwesiko
✓Ukucwiliswa Igolide phezu kweNickel (ENIG), faka igolide eliqinile
✓Umunwe Wegolide, Ukuphrinta KweCarbon, Okucwebezelayo S / M.
✓I-Flash Gold (i-Hard Gold plating)
✓Imaski yeSolder: okuluhlaza okwesibhakabhaka, okuluhlaza okwesibhakabhaka, okubomvu, okumnyama, okuphuzi, nokumhlophe kuyatholakala
✓Usilika screen: white, blue, obomvu, ophuzi, omnyama, oluhlaza ayatholakala
Siyajabula ukukwazisa ngesiphetho esifaneleke kakhulu ngokuya ngezici eziningi ezibandakanya impilo yeshalofu, ukunikezwa kokucatshangelwa, ukwakheka komhlaba, ukuhlangana kwamawindi avulekile phakathi kwezinqubo nezindleko ezisobala.
Wonke amabhodi ahlinzekiwe afaka umbiko wekhwalithi ophelele ocacisa ukucaciswa kwamapulangwe amabhodi kanye nesigaba esiphambanweni uma kudingeka esikhombisa ukujula kwesendlalelo sangaphakathi sendawo yokufaka imbobo kanye nokwelashwa kwendawo.
IPandawill nayo inikela ngemibala ehlukahlukene yesifi kanye nokuqeda (isicwebezelisi noma i-matte) ukuhambisana nezidingo zakho zedizayini. Ngenkathi iningi lama-PCB akhiqizwa embonini okuluhlaza okwejwayelekile, siphinde sinikeze ukumelana okubomvu, okuluhlaza okwesibhakabhaka, okuphuzi, okucacile nokukhanyayo okumhlophe nokumnyama okusetshenziswa kakhulu ekwenziweni kwezicelo zokukhanyisa ezenzelwe i-LED ukukhombisa noma ukucindezela ukukhanya komngcele. Yonke le mibala engenhla inikezwa ngaphandle kwemali ekhokhwayo futhi ama-inki asetshenzisiwe abekiwe ukuze anikeze amazinga aphakeme kakhulu okushesha kombala nokumelana nokufiphala kanye / noma ukuguqulwa kombala lapho kusetshenzwa.